PressReader - Ilanga: 2017-09-07 - UNGAZUZA NGOKUPHINDIWE NGOTSHAALONGXUBE
UNGAZUZA NGOKUPHINDIWE NGOTSHAALONGXUBE
Ilanga - 2017-09-07 - Imibono - Ungasithinta kwethi: 082 789 4281 noma ngokuxhuma ikheli elithi www.sicelokunene.co.za, ekhasini elithi: Contact us.
ISIMO sezulu yisona esihlahla indlela yezolimo esikhathini sonyaka okuvame ukutshalwa ngaso ngokuhlukana kwezifunda. Kuya nanokuthi kulowo nyaka izimvula ziqale nini ukuna imvula elingene ukuqalwa kokutshala. Kuyasiza-ke ukuba ezinhlelweni zokutshala okuzayo, umlimi abe nalo uhlelo “lukasenzenjani” uma kuvela isimo esingalindelekile.
Sizolinganisa ngokuxuba izitshalo okubizwa ngamagama ahlukene esiNgisini okuyi-intercropping noma i-mixed cropping, esikubiza ngokuthi utshalongxube esigodini sakithi. Lolu hlelo lusiza ngokuthi umlimi uyakwazi ukuxuba lezo zitshalo ezikwaziyo ukumelana nesomiso nalezo ezidinga imvula. Ngale ndlela uma izimvula zigculisa, umlimi uyakwazi ukuzuza ngesivuno, kanti nomndeni wakhe uyabhekeleka.
Utshalongxube siyalukhuthaza ikakhulukazi lapha ohlelweni lwechabuthi ngoba lusiza nasekulweni nezifo ezihlasela amasimu. Angithi izifo eziningi zifika nezinambuzane nezilokazane ezithile. Kuyothi ngesikhathi zithi ziyahlasela kanti eduze kwesitshalo kukhona olunye uhlobo olunobuthi kulezo zinambuzane bese zigcina sezidideka zingabe zisahlasela, mhlawumbe ziyozama kwamakhelwane.
Esinye sezibonelo esingazisebenzisa kutshalongxube, ngolukapelepele. Abalimi abayidlanzana esixoxa nabo, bathi bakhiqiza upelepele ngenhloso yokuhweba nezimakethe kanti bayayenza impela inzuzo egculisayo. Iseluleko wukuthi noma ungaze ube nohwebo olunenzuzo ezimakethe, kungakusiza ukungaluzibi uhlelo lotshalongxube ngoba upelepele nje
uyazondwa yizilokazane eziningi ezihlasela amasimu.
Lokhu singabambelela kukhona bese sixuba upelepele nezitshalo esikwazi ukuhweba ngazo ezimakethe siphinde sikwazi ukondla imindeni yethu ngalezo ezingaphasi emakethe, size sondle nezindawo ezifana nezinkulisa nezikole zamabanga aphansi. Ngale ndlela umlimi uyakwazi ukuzimbandakanya nentuthuko yesigodi sakubo.
Uyabona ukuthi ngokusebenzisa uhlelo lotshalongxube uyakwazi ukusebenzisa indawana encane uzizuzele isivuno esiphindekile, ulwe nezifo, uze uzenzele isimo sokonga umswakama ensimini (microclimate).
Sengike ngabona abanye abalimi baseAfrika bexuba upelepele, ummbila, isoya namabele ensimini. Ungaqagela nje nawe ukuthi ingakanani inzuzo etholakala ngokwenza kanjalo. Uma ufisa ukuzama lolu hlelo, kudinga uluncikise ekutheni ngabe ufuna ukuhweba ngaphezu kokondla umndeni noma ukondla umndeni ngaphezu kokuhweba okanye kokubili.
Kulapho-ke isiNgisi sivama ukuhlukanisa khona ngoba bathi i-mixed cropping kayinaluhlelo olutheni, umlimi uyaxuba nje yinoma kanjani kanti kwi-intercropping kusuke kunohlelo olulandelekayo olubeke izinhloso nezidingo zomlimi phambili, kangangoba ngisho insimu isuke isiklanywe ngezizinda ezizokhuthaza ukufezeka kwezinhloso zakhe.